May 2009 – Zox Zin Min
Written by Zox Zin Min May 28, 2009
ကျွန်တော်နဲ့ ဒူဘိုင်းရောက်ခါစ . . .
ဒူဘိုင်းရဲ့ တခြားကုမ္မဏီတွေတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္မဏီကတော့ ရောက်ရောက်ချင်း ကြိုတင်ငွေ (Advance) ကို မပေးသေးဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးသလို ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကလည်း အဲဒီအချိန်မဖွင့်သေးတာလဲ ပါမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်ပေါ့ဗျာ။ ရန်ကုန်ကနေတော့ ကျွန်တော်ဒေါ်လာ (၅၀) ပဲထည့်လာတယ်။ ရောက်ပြီးသုံး၊ လေးရက်လောက်ကြာတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အရမ်းလိုအပ်တဲ့ ဖုန်းကဒ်တစ်ကဒ်ဝယ်တယ်ဗျာ။ ဟဖ်ရှုးတစ်ရံဝယ်တယ်ဗျာ။ တခြားအပိုဆိုလို့ ကျွန်တော်ဘာမှ မသုံးခဲ့ဘူးဗျ။ (ယူလာမိတာကလည်း ၅၀ ပဲကိုး) အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဘယ်နိုင်ငံကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းဆက်ရင် ဈေးအင်မတန်ကြီးတော့ ဖုန်းတောင်ကျွန်တော်ရောက်ပြီး ၃ ရက်လောက်နေမှ (၁) ခေါက်ပဲ ဆက်ဖြစ်တယ်။ မိန်းမကိုလည်း အရမ်းလွမ်းတာကိုးဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ကျန်နေတဲ့ငွေစလေးတွေကို ကျွန်တော်တစ်နေရာမှာပဲ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ (ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်အဓိက ပြောချင်တဲ့အကြောင်းက အခုမှစမှာပါ) […]
Written by Zox Zin Min May 24, 2009
ကောင်မလေးရေ… ငါညကအိပ်မက်မက်တယ်။ နင်ငါ့ဆီကို ရောက်လာတယ်တဲ့။ ငါပျော်လိုက်တာဟာ။ ငါမျှော်လင့်နေတဲ့ နင့်ကိုငါ့အနားမှာ မြင်လိုက်ရတော့ ငါဘယ်လောက်ပျော်လိုက်မလဲ။ ငါတို့ဆုတောင်းတွေ ပြည့်ပြီပေါ့။ ငါတို့ ရည်မှန်းချက်တွေ အထမြောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးရယ်။ နင့်ကိုငါ့အနားမှာတွေ့ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာပဲ နင်ပျောက်သွားတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို ငါလိုက်ရှာပါသေးတယ်။ ငါ့ရင်ဘတ်ကို အရှင်လတ်လတ်ခွဲခံလိုက်ရသလိုပဲ ကောင်မလေးရယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ဆိုပေမယ့် ငါ့ခန္တာကိုယ်တစ်ခုလုံး တဆစ်ဆစ်နာနေတယ်။ ဘယ်လိုမှ နင့်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူး။ ခါတိုင်းလိုပဲ အားရပါးရငါငိုမိတယ်။ ကောင်မလေးရယ်။ ဒီတစ်ခါကျတဲ့ မျက်ရည်တွေက အမြဲတမ်းထက် ပိုပူလောင်နေတယ်။ နင့်ကိုငါဘယ်မှာ ရှာရမလဲ။ နင်ပျောက်သွားတာကို ငါသိပေမယ့် နင့်ကိုပြန်တွေ့နိုင်မယ့်နေရာကို ငါမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ငါ့နားထဲကိုအသံတစ်သံဝင်လာတယ်။ ငါရန်ကုန်က ထွက်သွားတဲ့နောက် နင်ပြောထားခဲ့တဲ့ နင့်ရဲ့ Voice Mail လေးပါ။ တကယ်ဆို ငါငိုမိမှာကိုကြောက်လွန်းလို့ ဒီနေ့ထက်ထိ […]
Written by Zox Zin Min May 22, 2009
ကောင်မလေးရေ… နင်နဲ့ ပြန်ဆုံဖိုအတွက် ငါအသက်ဆက်ရှင်ရဦးမယ်။ နင့်မျက်နှာလေးကို ပြန်မြင်ရဖို့အတွက် ဒီမျက်လုံးတွေနဲ့ငါ ငိုနေရဦးမယ်။ နင့်ကိုနောက်ထပ်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောဖို့အတွက် ဒီနှုတ်ခမ်းနဲ့ နင့်ကိုတသနေရဦးမယ်။ နင်နဲ့ ငါ့ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် ငါအသက်ဆက်ရှုနေရဦးမယ်။ ကောင်မလေးရေ… ငါဘယ်လိုနေရမလဲ…။ အခုရှိနေတဲ့ အလွမ်းတွေထက်စာရင် အရင်ကအဆင်မပြေမှုတွေကတောင် ငါခံနိုင်ရည်ရှိပါသေးတယ်။ နင့်လက်ကလေးကို ဒီအချိန်ဝေးနေရတာထက်စာရင် အရင်က ဖုန်ပေနေတဲ့ လက်နဲ့တွဲထားရတာကို ပြန်တမ်းတမိတယ်။ အခုအချိန်အိပ်မရတာတွေထက်စာရင် အရင်က အိပ်ရေးပျက်တာတွေကတောင် ငါ့အတွက်အဆင်ပြေပါသေးတယ် ကောင်မလေးရေ… နင့်ဆုတောင်းတွေကို ငါမျှော်လင့်နေတယ်။ နင့်အားပေးစကားတွေကို ငါကြားယောင်နေတယ်။ ငါတို့အနာဂတ်ကို ငါဖန်တီးနေတယ်။ ကောင်မလေးရေ… နင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္တာကိုပြန်လည်ထွေးပွေ့နိုင်ဖို့အတွက် ဒီလက်တွေနဲ့ပဲ ငါကီးဘုတ်ကို ရိုက်နေရဦးမယ်။
ဒီနေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဂျူတီအပြီးလမ်းလျှောက်ရင်း ဒူဘိုင်း Bus stand ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တနေကုန် အလုပ်တွေနဲ့ပဲ နပန်းလုံးရင်း အလုပ်ပြီးချိန်မှာ အညောင်းအညာပြေ လမ်းလျှောက်ကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ မြန်မာစကားကို အားရပါးရပြောရတဲ့ အချိန်လိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းက ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ ကျွန်တော့်ဂျူတီက ညနေ ၅း၀၀ နာရီပြီးပေမယ့် သူ့အလုပ်ပြီးချိန် ည ၁၀း၀၀ နာရီကိုစောင့်ရင်း သူနဲ့အတူတူ ၁၀း၀၀ ကျော်မှ ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်စတန်းကိုလည်းရောက်ရော ထူးထူးခြားခြား တခါမှ အားတယ်ဆိုတာ မတွေ့ရတဲ့ Taxi တွေ၊ အားလုံးခါလီနဲ့ လူခေါ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက်ကြည့်ပြီး အံ့သြနေမိကြပါသေးတယ်။ ဘတ်စ်စတန်းကို လာတယ်ဆိုတာကလည်း ဘတ်စ်တန်းရဲ့ ဟိုဘက်မှာ Super Market အကြီးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ အအေးဝယ်သောက်၊ ဘယ်အီလက်ထရောနစ် […]
Written by Zox Zin Min May 18, 2009
From .. Kaung ma lay
အမြဲတမ်းပြောနေကျ စကားတစ်ခွန်းကိုပဲ ငါထပ်ပြောမယ်။ အရမ်းသတိရတယ်ဟာ။ နင်နဲ့ငါနားထောင်နေကျ သီချင်းတွေကို နင့်ကိုငါသတိရတဲ့အချိန်တိုင်း နားထောင်မိတယ်။ အဲဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ရင်း ငါတို့ ၂ ယောက်နီးခဲ့ရသလို၊ အဲဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ပဲ နင်နဲ့ငါခွဲခဲ့ကြရတယ်နော်။ ငါဘယ်လိုနေရမလဲ။ နင့်ရဲ့ငိုသံတွေကို ငါဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲ။ နင်ပြောခဲ့သလို နောင်တချိန်ငါတို့ အမြဲတူတူနေရဖို့ အခုခဏဝေးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါစေဟာ။ ကောင်မလေးရေ…. နင်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ အိတ်ဆောင်အဘိဓါန်လေးကို အခုလည်းငါဖတ်နေတုန်းပဲ။ အဲဒီအဘိဓါန်စာအုပ်လေးရဲ့ Alpahbets တွေနဲ့အတူတူ နင့်ရဲ့စိတ်ကူးလှလှလေးနဲ့ ရေးပေးခဲ့တဲ့ နင့်ရဲ့စာရွက်အပိုင်းလေးတွေကို အခုလည်းငါဖတ်နေတုန်းပဲ . . . A – အလိုတော်နဲ့ (ဘုရားသခင်) အလိုတော်နဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မင်းခက်နဲ့ Paraween ကိုအမြန်ဆုံး နီးကပ်ခွင့်ပေးပါစေ။ အလိုတော်နဲ့ မင်းခက်အစစအရာအရာ အဆင်ပြေပါစေ။ Paraween ကိုလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီးချစ်နိုင်ပါစေ။ […]
Written by Zox Zin Min May 16, 2009
အချစ်စစ် ၊ ကိုနွယ်ရိုး နှင့် ZOX
ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်တွေလျှောက်လည်ရင်းနဲ့ ကိုနွယ်ရိုးရဲ့ဘလော့ဂ် ကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ (ဘာလည်းအချစ်စစ်ဆိုတာ) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကိုနွယ်ရိုးက ပို့စ်အဆုံးမှာ မေးခွန်းလေးတွေကို မေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဆိုတော့ အခုဒီမှာပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခံယူချက်ပါ။ တိုက်ဆိုင်သူရှိသလို ကွဲလွဲသူတွေလည်းရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ခံယူချက်ကို တင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက် ကိုနွယ်ရိုးကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေးအဖြေ တွေကို အောက်မှာဖတ်ရှုကြည့်ပါဦး။ ကျွန်တော့်မှာမေးခွန်းတွေရှိလာပါတယ် .. ၁)အချစ်တစ်ခု စစ်မစစ်ဆိုတာ ဘာနဲ့တိုင်းတာမလည်း ….. (ကျွန်တော့်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့အစ်မကြီး တစ်ယောက်ကတော့ ခံစားချက်နဲ့တိုင်းတာတယ်တဲ့) ၂) လူတစ်ယောက်ဟာ အချစ်စစ်ကိုဘယ်နှစ်ခါလောက်တွေ့နိုင်လည်း …. ၃) အချစ်စစ်ဟာ ဘယ်လိုအခြေနေနဲ့ ဘယ်သူတွေဆီကနေရနိုင်လည်း …. ၄) အချစ်စစ်ကိုကြိုးစားလုပ်ယူ၍ ရနိုင်လား ….. ၅) […]
Written by Zox Zin Min May 15, 2009
ကောင်မလေးရေ… နေကောင်းလား။ အခုဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ငါ့ကို သတိရနေရဲ့လား။ ငါကတော့ နင့်ကိုအချိန်တိုင်း သတိရတယ်။ သိလား။ (ခဏခဏ) သတိရနေတာက တစ်နေ့လုံးပါပဲ။ ငါ့ရဲ့နေ့တစ်နေ့က နင့်ကိုသတိရတဲ့ အဲ့ဒီခဏများစွာနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် ကောင်မလေးရယ်။ နင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိရစရာတွေ ငါ့အတွက်အများကြီးရှိပေမယ့်လည်း နင်ကတော့ ငါ့အနားမှာရှိမနေသေးဘူးနော်။ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်သိလား။ နင့်ကိုလည်း အရမ်းလွမ်းတယ်။ ငါယုံကြည်တယ်။ နင်ငါ့အနားမှာရှိရင် ငါပျော်နေလိမ့်မယ်။ မြန်မြန်လာပါတော့။ နင်မြန်မြန်လာပါတော့။ ငါ့နှလုံးသားက တောင်းဆိုနေပါတယ်။ (ကောင်မလေးရေ.. နင်မှတ်မိလား ဒီစာလေးကို။ သိချင်ရင် အောက်ကလိုင်းကို မောက်စ်နဲ့ ဒရဂ် ဆွဲပြီးကြည့်ကြည့်) … မောင်တို့ချစ်သူဘ၀တုန်းက မောင့်မိန်းမရေးပေးခဲ့တဲ့ စာလေးတစ်စောင်လေ။ မောင်ပြန်ပြင်ရေးထားတာ။ …
Written by Zox Zin Min May 14, 2009
တစ်ခါက ကြုံခဲ့ရသော (၂)
ကျွန်တော်ရောက်ခါစကပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမယ့် ဟိုတယ်ကမဖွင့်သေးဘူးဗျ။ ဟိုတယ်အသစ်အတွက်ကျွန်တော့်ကို ခေါ်လိုက်တာ။ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရဖို့ ကျွန်တော်တော်တော် ရင်မောခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်းဒီကို Visit Visa နဲ့လာခဲ့တာပါ။ ရောက်ပြီးတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့ ကိုယ်နဲ့အပ်စပ်မယ့် အလုပ်ကိုရှာရတာပေါ့ဗျာ။ သတင်းစာလဲဖတ်၊ အလုပ်ခေါ်စာတွေလည်း ကြည့်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ ဟိုတယ်တစ်ခုကမန်နေဂျာက ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး အင်တာဗျူးတယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို လက်ခံလိုက်တယ်။ Receptionist Position မှာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိဟိုတယ်အတွက်မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူတို့နောက်ဖွင့်မယ့် ဟိုတယ်အတွက်ခန့်တာ။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့ဟိုတယ်က ဆောက်နေတုန်း။ အလုပ်ရပေမယ့် ဟတ်ကော့ကြီးပေါ့ဗျာ။ တစ်ခုကံကောင်းတာက လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ အဲဒီဟိုတယ်ရဲ့ Receptionist ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသား ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်။ သူ့ကူညီမှုတွေလည်း အများကြီးပါတာပေါ့ဗျာ။ သူကကျွန်တော့်ကို Recommand ပေးတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာတွေလည်း အများကြီးပေးပါတယ်။ သူ့အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော် Training […]
Written by Zox Zin Min May 9, 2009
တစ်ခါက ကြုံခဲ့ရသော . . .
တစ်ခေါက်ကပေါ့ဗျာ။ သဘောင်္ကျင်းတစ်ခုရဲ့ General Worker အလုပ်နဲ့လာမယ့် သူတစ်ယောက်ကို ဗီဇာတင်ပေးရပါတယ်။ နှစ်လလောက်အကြာမှာ ဗီဇာကျသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ အလုပ်တည်နေရာက Fujairah ဆိုတဲ့နေရာမှာပါ။ ဗီဇာကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့် အဲဒီကာယကံရှင်ရဲ့ အကောင့်ထဲကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗီဇာရတဲ့နေ့ကနေ တစ်လအတွင်းလာခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသူကလည်း ယူအေအီးကို မြန်မြန်သွားချင်တယ်ဆိုပြီး ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကို အလျင်အမြန်ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပြင်လို့ဆင်လို့ပြီးလို့ (ငြုပ်သီးကြော်၊ အမဲကြော်နဲ့ ငါးခြောက်တွေ ပါကင်ပိတ်ပြီးလို့) အနီးကပ်ဆုံးရက်တစ်ရက်ကို ဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့ Airticket ရုံးကိုသွားပါတယ်။ Ticket Agency တစ်ခုကိုသွားတာပါ။ ယူအေအီးက ပို့လိုက်တဲ့ Work Permit Visa ကိုပြပြီးတော့ YGN-BKK-DXB လတ်မှတ်တခြမ်းကို ၀ယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအေဂျင်စီက ၀န်ထမ်းကဒီဝေါ့က်ပါမစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ လတ်မှတ်ရောင်းပေးလို့မရကြောင်း၊ ယူအေအီးဘက်က အလုပ်ဌာနရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ယောက်က ဒူဘိုင်းမှာရှိနေတဲ့ TG […]
Written by Zox Zin Min May 5, 2009
ငါ့ရဲ့ချစ်သူလေး ပျော်နေပါစေ။ သောကတွေကို ငါကြုံနေရရင်လည်း နင်ပျော်နေရင် ငါကျေနပ်ပါတယ်။ ငါနင့်ကိုလွမ်းလို့ ကြေကွဲနေပေမယ့် နင်တော့ငါ့လို မကြေကွဲနေပါစေနဲ့။ နင့်အပြုံးတွေကိုပဲ ငါ့တသက်လုံး မြင်ချင်တယ်။ နင်လည်းပဲ ငါ့ကိုငိုမှ မငိုစေချင်ခဲ့တာ။ နင့်ကိုလွမ်းလို့ကျတဲ့မျက်ရည်တွေကို အခုငါအသာလေးခိုးသုတ်မိပေမယ့် အမြဲတမ်းလိုပဲ သုတ်ပေးနေကျ နင့်ရဲ့လက်လေးကို ငါတောင့်တနေမိတယ်။ ပြီးတော့ နင့်ကိုရင်ခွဲထဲတည့်ပြီး ငါ့ရဲ့ငိုသံတွေကို အရင်ကလိုပဲ အဆုံးသတ်ချင်မိတယ်။ ချစ်သူလေးရေ………….။ အခုငါဘယ်လိုနေရမလဲ။ လွမ်းလိုက်တာဟာ။ နင့်ကိုအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့သူကို အခုငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါ။ ငါ့ထက်ပိုပြီး ဘယ်လိုများချစ်နိုင်မလဲလို့ ငါကြည့်ချင်မိတယ်။ ငါ့ထက်ပိုပြီး နင့်အတွက်(နင့်ကိုလွမ်းလို့) ဘယ်နှကြိမ်ငိုခဲ့ရသလဲလို့ ငါမေးကြည့်ချင်မိတယ်။ ငါ့ရင်ဘတ်လို နင့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ သေတဲ့အထိထားနိုင်မလားလို့ ငါသိချင်မိတယ်။ …………………….။ နင်နဲ့ဆုံစည်းခွင့်ရပြီးမှ မပြည့်စုံတဲ့ငါတို့ဘ၀ကို ငါဝမ်းနည်းလိုက်တာ။ တကယ်လို့ ငါတို့သာအဖက်ဖက်က ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင် နင်နဲ့ငါဒီလို ဘယ်ခွဲရပါ့မလဲ။ ငွေဆိုတဲ့အရာကလည်း အရမ်းချစ်တဲ့ချစ်သူတွေကို (တစ်ခါတစ်ခါ) […]